सिटिजन्स बैंकको ६३ औं शाखा बर्दियाको बढैयाताल मैनापोखरमा – Pahilo Page
सिटिजन्स बैंकको ६३ औं शाखा बर्दियाको बढैयाताल मैनापोखरमा
काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा आफ्नो दरिलो पहिचान बनाउन सफल रहेको सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आफ्नो ६३ औं शाखा बर्दियाको बढैयाताल मैनापोखर सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोधराज देवकोटाले पूजापाठ गरी सोमवार बैंकिङ कारोवारको सुरुवात गरेका हुन् ।
उक्त समारोहमा जिल्लाका उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारी, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले ग्राहक महानुभावहरुलाई देशैभरि फैलिएको यस बैंकको ६३ वटा शाखा, ६२ वटा ए.टि.एम. काउन्टर र ९७ वटा शाखारहित आधुनिक बैंकिङ सेवाहरुबाट करिव ३ लाख ५० हजार ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै आफ्नो ग्राहकवर्गहरुलाई रेमिट्यान्स सेवा, ड्राफ्ट, भिसा ए.टि.एम. कार्ड सेवा, भिसा इन्टरनेसनल डलर कार्ड सेवा, विभिन्न किसिमका निक्षेप तथा कर्जा सुविधाहरुका साथै कुनै पनि शाखाबाट रकम झिक्न र राख्न सकिने जस्ता सुविधाहरु प्नि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
उक्त समारोहमा सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत बैंकले जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय र श्री बागेश्वरी निम्न माध्यमिक विद्यालय लाई १÷१ थान कम्प्यूटर सहयोग स्वरुप हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बोधराज देवकोटा र बढैयाताल गाँउपालिका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले संयुक्तरूपमा कम्प्यूटर हस्तान्तरण गरेका थिए । शाखाका इन्चार्ज दिनेशकुमार ढुंगानाले यस क्षेत्रमा कृषि कर्जा, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी गर्ने बैंकको उद्देश्य रहेको जानकारी दिएका थिए ।
नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रवक्ता गणेश राज पोखरेलका अनुसार मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै अब दुर्गम क्षेत्रका सर्वसाधारणले बैंकिङ सेवा लिन जिल्ला सदरमुकाम वा शहर बजारमै पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य गर्नका निम्ति अब आउने निकट भविष्यमा नै बैंकले हुम्लाको सर्केगाड, झापाको हल्दिबारी, महोतरीको औरही र दांङको बंगलाचुलीमा थप शाखा सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारेको कुरा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले जानकारी गराएका छन् ।
प्रकाशित मिति : मङ्गलवार, कार्तिक ०७, २०७४ समय : १३:३६:५२ 374 पटक पढिएको